ဓာက်တော်တောင်ခြေမှ သပြေပင်မှရေထွက်သော သပြေရေထွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ဓာက်တော်တောင်ခြေမှ သပြေပင်မှရေထွက်သော သပြေရေထွက်
ဓာက်တော်တောင်ခြေမှ သပြေပင်မှရေထွက်သော သပြေရေထွက်
Posted by thihayarzar on Jul 27, 2010 in History | 8 comments
သပြေရေထွက်သည် ဓာက်တော်တောင်၏ တောင်ခြေတွင်တည်ရှိပါသည်။ သပြေပင်မှအောက်မှ ရေများထွက်သောကြောင့် သပြေရေထွက်ဟုခေါ်ပါသည်။ ရေများသည် ရာသီမရွေး အမြဲတမ်းစီးဆင်းနေသောကြောင့် မြောင်းသဖွယ်ပြုလုပ်ပြီး အနီးနားရှိရွာများမှ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ အတွက် အားထားရာဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် သပြေပင်ကိုလှဲပြီး ဘုရားတစ်ဆူတည်ထားပါသည်။ ရေများကိုမြောင်းပုံစံပြုလုပ်ပြီး ရေကန်ကြီးများဖြင့် ထိုရေများကိုသိုလှောင်ထားပါသည်။ အနီးနားရှိရွာမှ လူများအတွက် သောက်ရေ သုံးရေ အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ လယ်ကွင်းများဆီသို့ မိမိတို့အိမ်ဆီသို့လည်း လှည်းများပေါ်တင် ပေပါကြီးများတင်ပြီး လာရောက်သယ်ယူကြပါသည်။ တန်ခိုးကြီးသည့် ဓာက်တော်လှိုဏ်ဂူကိုလည်း ဖူးမြော်ရင် ထူးဆန်းလှသည် သပြေရေထွက်လည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပွဲတော်အချိန်ဆိုလျှင်များ ပိုမိုထွက်လေ့ရှိပါသည်။ ပွဲတော်လာဈေးသည်များ ဧည့်သည်များအတွက် ရေလုံးဝပူစရာမလိုပါ။ နောက်ထပ်လည်း ကတိုးရေထွက်ဆိုတာရှိသေးတယ်။ ဓာက်တော်တောင်ခြေကနေနည်းနည်း သွားလိုက်ရင် ရောက်တယ်။ သူကတော့ တွင်းလေးထဲကနေ ရေတွေပွက်ပြီးတော့ကို ထွက်လာတာ အရင်ကတော့ ပိုက်ဆံ ကျပ်ပြား စေ့လေးတွေကို ပစ်ချရင်ပိုပြီးတော့ ရေတွေပွက်တယ်တဲ့။ မောင်နှမနှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ကတစ်ခုခုကို အော်လိုက်ရင်လဲ ပိုပြီးပွက်ပြတယ်တဲ့။ ကတိုးရေထွက်ကလည်းရေများ ရသြီမရွေးထွက်ရှိနေခြင်းကြောင့် မြောင်းသဖွယ်ပြုလုပ်ပြီး ရေကန်ကြီးများဖြင့် သိုလှောင်ထားပြီး အနီးအနားရှိရွာများမှ ရွာသားများအတွက်ရေမရှားတော့ပါ။ ကတိုးရေထွက်ကိုအစွဲပြုပြီး ကတိုးရွာလို့လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ထူးဆန်းစရာတွေပေါများလှသည် ကျောက်ဆည်မြို့ဆီသို့ တစ်ခေါက်လောက်တော့ လာရောက်စေချင်ပါသည်။
သူဘာသာ မြေကြီးအောက်က စိမ့်စမ်းရေဆိုတာ ထွက်တတ်တာဘဲ။ သူဘာသာ သပြေ ပင်အောက်ကလဲထွက်ချင်ထွက်မှာဘဲ။ မန်ကြီးပင်အောက်ကထွက်ချင်ထွက်မှာဘဲ။ တမာပင်အောက်က ထွက်ချင်ထွက်မှာဘဲ။ ဘာပင်အောက်ကမှ မဟုတ်ဘဲ။ သူဘာသာသူ ထွက်ချင်ထွက်မှာ ဘဲ။ ဒါသဘာဝလေ။ သပြေပင်ကြီး ခုတ်ပြီး ဘုရားတည်။ ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ် တန်ခိုးကြီးမယ်ပြောမယ်။ စဉ်းစားကြပါအုံး။
မင်းတို့ ကျောက်ဆည်က (သောက်သုံးမကျတဲ့) ဖွတ် ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဘယ်လောက် အသုံးမကျတဲ့ အကြောင်း၊ ပြောအုံးလေကွာ။
ကျောက်ဆည်က ဖွတ်ထွက်တာ မဟုတ်ဘူး ဘီလူး ထွက်တာ အဲဒီ ဘီလူးစား လို့ တတိုင်းပြည်လုံး ကုန်တော့မယ်
သူဖာသာဖွက်မကလို့ဘာပဲထွက်ထွက် … ကျောက်ဆည်ကိုတော့လာမထိနဲ့ ….. မင်းတို့ကဘယ်သိမလဲ …. တဏှာပဲလုပ်နေတာကို …. ကိလေသာကလည်း လိုက်စားလို့မ၀သေးဘူးမို့လား … ကျောက်ဆည်မှာရဟန္တာတွေ အများကြီးထွက်တာ မင်းတို့သိလား … မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ မြို့က ဖာသည်မတွေပေါတာလည်း ထည့်ရေးလေ …..
ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ အားလုံးက မြန်မာ နိုင်ငံ တခုတည်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ နေရာဒေသတွေဘဲ။ အချင်းများလို့ ကိစ္စတွေလည်း ပြောင်းသွားတာမှ မဟုတ်တာ အရှိကို အရှိလို့ဘဲ မြင်ကြတာ ပိုအေးချမ်းမယ် မဟုတ်လား။ စိတ်လျော့ကြပါ။